Tadiavin’ny Parlemanta Tajik Ho Arahana Maso Ireo Olompirenena Mitsidika Tranonkala “Tsy Ilaina” · Global Voices teny Malagasy
Tadiavin'ny Parlemanta Tajik Ho Arahana Maso Ireo Olompirenena Mitsidika Tranonkala “Tsy Ilaina”
Voadika ny 01 Aogositra 2017 15:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, русский, Français, Español, English
Tsangambaton'ny fahaleovantena ao Dushanbe, Tajikistan. Sary an'i Roberts Wilson tao amin'ny Flickr (CC BY-ND 2.0)
Ato ho ato ny sampandraharaha misahana ny filaminana ao Tajikistan dia hanana zo hanaraka maso ny ataon'ireo olompirenena ety anaty aterineto, amin'ny fitahirizana ny antsipirihan'ireo SMS amin'ny finday, ireo fanehoankevitra amin'ny media sosialy, ary na iza na iza mitsidika tranonkala “tsy ilaina”
Tamin'ity herinandro ity, nolanian'ireo parlemantera ny lalàna manome zo ireo sampandraharaha misahana ny filaminana ao amin'ny firenena mba ho afaka manaraka maso sy mifehy izay hetsika ataon'ny olompirenena ety anaty aterineto, ampahany amin'ireo andianà fanavaozana ny efa misy ao anatin'ny lalàna momba ny heloka bevava io.
Tsy mbola navoaka ho fantatry ny besinimaro akory ireny, saingy efa nahazo andinindininy avy amin'ireo manampahaizana sy parlemantera kosa ny Asia Plus, ilay tranonkalam-baovao ao an-toerana. Araka ny lazain'ilay tranonkala, misy antokon-draharaha roa manokana misahana ny heloka an-tserasera ao amin'ny Ministeran'ny Atitany, hiandraikitra ny fanarahana ireo Tajiks ety anaty aterineto.
Solombavambahoaka ao an-toerana i Saidjafar Ismonov, nanambara tamin'ny Asia Plus, fa afaka hohelohina nohon'ny “fanehoankevitra iray tsy araka ny tokony ho izy” ny mpaneho hevitra. Ireo fanehoankevitra heverina ho manohintohina ny vonihìnahitry ny olona na manimba ny filaminam-pirenena dia mety hahazoana sazy hatramin'ny fampidirana roa taona am-ponja, na mihoatra. Fa tsy mazava tsara aloha izay nofaritana amin'ny hoe “tranonkala tsy ilaina” na ” fanehoankevitra tsy araka ny tokony ho izy!.
Mpanohana iray an'ilay fanaovan-dalàna, fantatry ny maro tsara i Ozoda Rahmon, izay ankoatry ny maha-zanaky ny filoha azy, dia sady lehiben'ny etamazaorony, no mbola loholona ao amin'ny Majlisi Milli koa, ao amin'ny antenimiera ambony indrindra amin'ny parlemantan'ny firenena.
Natsofok'ilay solombavambahoaka Tajik, Jurakhon Mahmadzoda, aloha ireo fanovàna ary nanamarina ny antso natao tamin'ny fitarainana izy, nefa tsy nanolotra porofo, hoe mihoatra ny 80% amin'ny Tajiks manana fahafahana mampiasa aterineto no mitsidika “tranonkala tsy ilaina izay an'ireo fikambanana mpanao an-tendrony sy mpanao asa fampihorohoroana “.
Muhammadi Ibodullev, manampahaizana momba ny teknolojian'ny aterineto, nilaza tamin'ny sampana amin'ny fiteny Tajik ao amin'ny RFERL fa ny fitarainan'i Mahmazoda dia avy amin'ny tsy fahatakarana ny tena fototra. Tao anaty fihaonambe iray natao tao Dushanbe renivohitra, nisy olona iray niteny fa “80% amin'ireo Tajik mpikambana ao amin'ny ISIS [ilay milisy mahery fihetsika mifehy faritra maro ao Iràka, Siria ary Afganistàna] dia ny hafa no nampiditra azy, ary isan'izany ny tamin'ny alàlan'ny aterineto.”
Antontanisa roa tena samihafa ireo, saingy nalaky be ny solombavambahoaka Mahmadzoda tamin'ny fanolorana vahaolana momba izay hitany fa aterineto tsy voafehy.
Raha naneho hevitra momba ilay vaovao, nilaza ny ahiahiny ireo mpampiasa Facebook, momba ny mety ho famaritana ny hoe “tranonkala tsy ilaina”:
Raha tsy manana lisitra (tranonkala) fantatry ny daholobe, tsy ho afaka fotsiny hilaza araka izay tiany ry zareo (hoe tsy ilaina). Mitsidika tranonkala iray ianao, dia miala amin'iny. Fa aorian'izay mety efa namoaka zavatra vaovao ilay tranonkala, ary efa tsy tao intsony ianao.
Ho an'ny governemanta Tajik, nisy fanovàna tetika ihany koa tamin'ny fanaovana lalàna, governemanta izay ara-tantara dia nisafidy ny hanivana ireo tolotra sy tranonkala mahabe resaka. Ankehitriny, raha tokony ho fandraràna ny olompirenena tsy hiditra amin'ireo zavatra ety anaty aterineto, dia ho ampiasain-dry zareo ireny tranonkala ireny ho toy ny fitaovana hanarahana maso ny zavatra ataon'ny olompirenena.
Eny tokoa, nandritra ny taona maro, nibahana tsindraindray ny fidirana tamin'ireo media sosialy malaza ny tao Tajikistan, toy ny Odnoklassniki sy VKontakte rosiana, Facebook, YouTube, ary ireo tranonkala sangany ao an-toerana amin'ny fampitambaovao. Matetika voabahana ireny tranonkala ireny ao anatin'ny fotoana mampafampàna ny rivotra politika na fikorontanam-bahoaka, toy ny fifandonana ara-tafika tany amin'ny faritra maro tao amin'ny firenena. Voabahana nandritra ny herinandro ny Youtube tamin'ny 2013 taorian'ny niparitahan'ny lahatsarin'ny filoha Emomali Rahmon nandihy tamin'ny fampakarambadin'ny zanany lahy.
Afaka herinandro na volana vitsivitsy, tao anatin'ny tsindry iraisampirenena, niverina ny fahafahana miditra. Saingy tato anatin'ny taona vitsy, voasakana ambongadiny ireny tranonkala ireny, tsy fantatra izay tena antony mazava.
Tsy fahita firy izany governemanta miaiky izany hoe izy no manome baiko hibahanana tranonkala, fa ireo mpanome tolotra aterineto no imbetsaka nanamafy ny faharaisany baiko “am-bava” avy amin'ireo manampahefana.
Niteraka fampiasàna betsaka ny VPN – virtual private networks ny tsy fahazoana mitohy amin'ny fahafahana miditra amin'ireo sehatra sosialy sy fampahalalambaovao, ny VPN izay lasa fitaovana fototra hidiran'ireo Tajiks amin'ìireo tranonkala nobahanana, ary indrindra fa ireo media sosialy.
Nefa miaraka amin'ilay lalàna vaovao navoakan'ny governemanta, mety hiova io. Toa hita ho lasa aloha ny governemanta tamin'ny nisafidianany mialoha ny hamela ny fidirana amin'ny media sosialy sy ny fampiasàna azy ireny ho fomba iray hanarahana maso ireo olompirneena, fa tsy hoe hifehezana ny vahoaka amin'ny alàlan'ny fanaovana izay tsy hahazoana ireny tranonkala ireny.